Kunamata Zvinyorwa ZveMweya Wekuregerera | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Zvinyorwa zveMweya weRuregerero
Kunamata Zvinyorwa zveMweya weRuregerero
Nhasi tichabata neminamato mapoinzi yemweya wekuregerera. Kusaregererwa mweya ndechimwe chinhu chakatadzisa vanhu vazhinji kuwana tsitsi, nyasha nenyasha pamberi paMwari. Munamato waIshe unosimbisa pane kukosha kwekuregerera vamwe vanhu. Regererai nhasi sezvatinoregerera avo vanotitadzira izvi zvinoreva, sekutadzira kwatinoita Mwari uye naiye anotiregerera, tinofanirwa zvakare kudzidza kuregerera vamwe.
Mubhuku ra VaEfeso 4:32 asi ivai nemoyo munyoro mumwe kune mumwe, muchinzwirana tsitsi, muchikangamwirana, sezvamakakangamwirwa naMwari nekuda kwaKristu. Rugwaro runotikurudzira kuti tive nemoyo munyoro kune mumwe nemumwe, regereraiwo sekuregerera kwakaita Mwari. Pane marwadzo uye ruzvidzo rwatinofanira kudzidza kurega kuenda. Rangarira nyaya yemwanakomana mupambadzi akaregererwa nababa vake.
Mupambadzi aive atora kuzvarwa kwake kwese kubva kuna baba vake munguva isina kuibva ndokufamba achienda kunyika iri kure kuti anofara nehupfumi hwake. Kunyangwe baba vacho vaive vasina kufara kumutendera kuti aende, zvakadaro, havana kukwanisa kuvamisa. Mwanakomana akarasika akapedza zvese zvaakange apihwa nababa vake akauya achityoka. Hazvina kutora nguva asati ave murombo mune imwe nyika isingazivikanwe. Rimwe zuva, akaneta neese mamiriro uye akafunga kudzokera kuna baba vake kuti amukumbire ruregerero uye amutendere kushanda seimwe yebasa rake.
Zvinoshamisa kuti baba vake vakamutora vakapinda nemhemberero. Uyu mufananidzo unotsanangura hupenyu hwedu pamberi paMwari uye nemabatiro akaita Mwari kuregerera zvivi zvedu zvedu. Mwari anotarisira kuti tiregerere pane mumwe zvakare. Kune vamwe vanhu vanoona zvakaoma zvikuru kuregerera zvakazara. Kunyangwe vakaedza zvakadii, havakwanisi kungoenda zvachose. Unofanira kunzwisisa kuti Kristu anoda kuti tifanane naye pane zvese zvatinoita. Chimwe chezvibereko zvemweya Kuregerera. Kana isu simba remweya mutsvene muhupenyu hwedu, zvinova nyore kwazvo kwatiri kuti tiregerere vamwe vanhu kana vatitadzira.
Nei Uchifanira Kuregerera
Tinofanira kuregerera nekuda kwezvikonzero zvinotevera
Kune mufaro wedu
Kana iwe wakambotsamwa, iwe unonzwisisa kuti kusafara kunouya pese paunoona munhu iyeye akakugumbura. Izvi zvinoreva kuvepo kwemunhu iyeye kwaizotarisa kana iwe uchizotsamwa kana kufara. Asi iwe paunoregedza uye uregerere zvakakwana, kurwadziwa, kutsamwa uye chigumbu zvinobva zvaenda uye mufaro wako unozodzoserwa.
Isau haana kuziva mufaro kusvikira zuva raakakanganwira Jacob. Nekuti nguva dzese Esau paanorangarira Jacob, aigara azere nehasha uye hasha. Asi akatanga kuona humwe hutsva hwemufaro uye mufaro musi waakaregerera Jacob.
Ruregerero rega ukanganwe zvakapfuura zvinorwadza
Kufambira mberi muhupenyu nekukurumidza, tinofanira kuva nemweya wekuregerera. Paunobatirira pa marwadzo uye kutsamwa, iwe ucharamba uchirarama munguva yakapfuura. Kusvikira zuva raunofunga kuregedza, rinokusvinurira nhanho iwe nekukasira.
Usarega kusaregerera kuchikukiyira mujeri rekare. Rugwaro runoti usarangarira zvinhu zvekare nekuti zvese zvakaitwa zvitsva. Iwe hauzove neruzivo rwekutsva kusvikira iwe wadzidza kuregerera.
Kuti Mwari vatiregerere zvivi zvedu zvakare
Nzira iri nyore yekukanganwirwa naMwari ndeyekukanganwira vamwe. Chinyorwa chiri mubhuku ra Mateo 6: 14-15 Nokuti kana muchikangamwira vanhu kudarika kwavo, Baba venyu vari kudenga vachakukangamwiraiwo kana musingakangamwiri vanhu kudarika kwavo, Baba venyuwo havangakangamwiri kudarika kwenyu. Mwari vanokoshesa moyo unoregerera vamwe. Pane chikamu chekukura pamweya chatinofanira kusvika tisati tanzwisisa kuregerera vanhu zvivi zvavo.
Kuregererwa kunopodza ronda redu
Unokuvara kana mumwe munhu akakugumbura. Zvichakadaro, kutsiva hakuzorape marwadzo aunosangana nawo. Uchaona kuti kunyangwe ukatsiva pamunhu iyeye akakugumbura, hazvirape marwadzo.
Zvisinei, kurwadziwa kunogona kurapwa nekuregerera munhu iyeye. Paunoregerera vanhu, unozvisunungura kubva pazvisungo zvemarwadzo uye varanda hasha idzi dzakakuchengeta uye kamwe zvakare unova munhu akasununguka.
Ishe Jesu, ndinokusimudzirai nechipo cheupenyu chamakandipa kuti ndione nhasi. Ndinokutendai nekuti mave muri mudziviriri weGosheni yangu uye ndezvenyasha dzenyu kuti handipedzwe. Ishe, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamatira mweya wekuregerera. Ndinokumbira kuti mundiropafadze nemweya wekuregerera muzita raJesu. Ishe, handidi kuparadzwa nemarwadzo, kutsamwa uye chigumbu, ndinoda kusunungurwa nekuregerera vamwe vanhu. Ishe, ndokumbirawo mundipe mweya wekuregerera muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti muvhure maropafadzo ese ekuti kusakanganwirwa kwakandirambira, ndinonamata kuti muzondisunungura nhasi muzita raJesu
Ishe, ndinonamatira mweya wekuteerera kushoko renyu unoti tinofanira kuregerera vamwe sekuregerera kwakaita Mwari matadzo edu ose. Baba Tenzi, ndinonamatira kukura pamweya kusvika padanho iri muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinopesana nemweya wese wekuomesa musoro. Zvese mweya wasatani wekutapwa iyo inoda kundichengeta muhusungwa kuburikidza nemweya usina kuregererwa, ndinouparadza nemoto wemweya mutsvene.
Ishe Jesu, ndinonamatira kununurwa kubva musimba rekutapwa. Zvese zvehuranda zvandakandirwa nemweya wekuregerera, ndinozvityora nhasi muzita raJesu.
Ishe kubva ikozvino, ini ndinogamuchira nyasha kukanganwira uye kukanganwa. Ini ndinogamuchira nyasha kuti nditange kushanda mune rakakura dhizaini muzita raJesu. Nyasha dzekusachengeta kurwadziwa, kutsamwa kana chigumbu, ndinokumbira kuti undipe kwandiri muzita raJesu.
Previous nyayaKunamata Kunongedzera Kweushingi
inoteveraMinyengetero Yekurwisa Hondo Munyika
30 Ane Simba Emweya Wakachena Minyengetero minamato